Waaheen Media Group » Somaliland oo ku jirta diyaar garawga sanad guuradii 53 aad ee 26-kii Juun 1960-kii
Browse:Home Waaheen News Somaliland oo ku jirta diyaar garawga sanad guuradii 53 aad ee 26-kii Juun 1960-kii
Hargeysa(Waaheen) Madaxtooyadda Hargeysa ee Somaliland ayaa ku jirta diyaar garawga Xuska sanad guuradda 53-aad ee maalintii Xoorriyadda Somaliland ka heshay Boqortooyaddii Ingiriiska 1960-kii.
Sanadkasta Somaliland waxa ay xustaa maalintaas oo ahayd maalin ku weyn dadweynaha Reer Somaliland oo xusuustoodii dib ugu noqonayso halgankii dheeraa ee ay u soo mareen Xoorriyadoodii ay ka heleen Gumaysigii.
Sidoo kale, waxa ay xusuusta maalintani ku dheertahay shacbiweynaha Somaliland sidii fududayd ee ay u lumiyeen iyo Hayaankii dheeraa ee ay u soo mareen in ay dib ula soo noqdaan Xorriyadaasi.
Xuska sanad guuradan 53 aad ee maalintii Xorriyadda Somaliland 1960-kii ayaa habeenimada ay ku beegantahay lagu qabtaa qasriga Madaxtooyadda waxaana laga dareemayay ilaa shalay diyaar garawga loogu jiro munaasibadaasi, oo ah mid taariikhi ah.
Munaasibada lagu maamuusayo Habeenkan oo ahaa Habeen hamiga dadweynaha Somaliland ku weynaa balse la lumiyay ayaa lagu muuneeyaa Suugaan iyo Hab masrixiyadeed ka turjuma sooyaalkii taariikhdii halgan ee loo soo maray, iyadoo ay ka qayb galaan masuuliyiinta Xukuumadda iyo marti sharaf kale.